Ego doro anya adabalarị na Apple Pay na Spain na France | Esi m mac
Ezigbo ego ugbu a kwekọrọ na Apple Pay na Spain na France
Ka ọnwa na-aga, Apple gara n'ihu ịgbasa ọnụ ọgụgụ nke ụlọ akụ na-anabata Apple Pay Dị ka usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ na nke ọdịnala, ịkwụ ụgwọ a na-enweghị ịkpọtụrụ nke ghọrọ ihe ewu ewu na 2020 niile n'ihi ọrịa coronavirus, na-aghọ karịa karịa na mbụ.
Banklọ akụ ikpeazụ ka were Apple Pay n'etiti ọrụ ya na Vivid Money (Solarisbank nọ n'azụ neobank a) ụlọ akụ nke rutere France na Nọvemba gara aga na nke ahụ rutere Spain na Jenụwarị gara aga, si otú a ghọọ onye ọzọ na-ama-mara N26 na Revolut n'etiti ndị ọzọ.
A mụrụ Ezigbo Ego na 2019 na ugbu a nwere ihe fọrọ nke nta ka ndị ọrụ 200. Na Spain, ọ na-enye nkwụghachi ihe ruru 10% nke ihe anyị zụtara, ohere nke itinye ego na ebuka na ego itinye ego, yana ikwe ka anyị rụọ ọrụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ego.
Nwere ike ịgbakwunye kaadị ego gị dị na ya #Akwụ ụgwọ! Bido ịkwụ ụgwọ n'enweghị kọntaktị na ụlọ ahịa, na ngwa yana site na weebụ. #VividMoney pic.twitter.com/96EwTs8QdG
- ugochukwu (@nwachukwu_) February 16, 2021
Ọ bụrụ na ị na-eche ịgbanwe na otu n'ime ụlọ akụ ndị a, na ọnọdụ nke Vivid Money na-enye maka mkpa gị, ị nwere ike ime nke a site na udo nke uche na ị nwere ike ịga n'ihu iji Apple Pay na ụlọ akụ a. Ọ dakọtara na Google Pay.
Lọ akụ a bụ otu n'ime mmadụ ole na ole, ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị ya agbachitere ahịa site n'ịrụ ọrụ ụlọ niile, ma ọ dịkarịa ala n'ihe gbasara inye nkwado maka ụzọ abụọ isi akwụ ụgwọ ugbu a, dị ka Apple Pay na Google Pay.
Ezigbo ego bụ Neobank nke Russia-German na-arụ ọrụ na mpụga Europe. Ọ na-enye ụdị akụkọ abụọ: enwere oke na njedebe mgbe ị na-ewepụ ya na akaụntụ adịchaghị, nke nwere ọnụahịa nke 9,99 euro nke na-ewelite nkwụsị nkwụsị ruo 1000 euro, kaadị ọla VISA na ego ka ukwuu na ọrụ maka ịzụrụ ihe anyị mere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ezigbo ego ugbu a kwekọrọ na Apple Pay na Spain na France
Ogige Ndị Ọchụnta Ọhụrụ nke Black Apple Founders na Ndị Mmepe
Malware dị na macOS dị adị ma daa na 2020 a dị ka Malwarebytes